गोरुको मासु कलेजो - द्वारा-उत्पादन एक मूल्यवान, भिटामिन ए, बी भिटामिन, संग सार्थक niacin। खाने मासु कलेजो - रक्तअल्पता रोक्न सही विकल्प छ। सबै को पहिलो, समाप्त कलेजो को स्वाद मात्र मासु कलेजो रोस्ट कसरी गर्न निर्भर, तर पनि यो जनावर र अन्य मापदण्डहरू के उमेर, ताजा छ कसरी।
एक मासु कलेजो कसरी चयन गर्न
यसलाई आफ्नो पोषक को आधा र समाप्त उत्पादन deteriorates गुणस्तर भन्दा नष्ट थप देखि स्थिर जिगर chilled, चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। Chilled कलेजो एक चिल्लो, चमकदार सतह हुनुपर्छ। जिगर, यो, केही समय अन्यथा थियो यो चम्कने हराएको छ र यो एक अपारदर्शी रंग बन्नेछ। बाछाको मासु कलेजो त गहिरो रातो मासु कलेजो अब चेरी, गाढा रातो रंग छ भने यदि रंग पशु कलेजो उमेर देखि फरक हुन्छ। यो मात्रा भर नै रंग हुनुपर्छ। पदचिन्हछैन बाँकी छ थिचेर औंला संग ताजा कलेजो मा, अरू सबै कुरा जिगर अब ताजा छ कि सुझाव।
कसरी तलना गर्न बीफ कलेजो? सिद्धान्त, यो छैन त गाह्रो, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पकाउने को प्राविधिक प्रक्रिया पालना गर्न छ। ठीक पकाएको कलेजो, तीतो नरम र कोमल छैन।
एक सानो सोडा;
frying लागि तेल;
कलेजो राम्ररी पारदर्शी फिलिम देखि साफ, नसाहरु र ठूलो नसाहरु कटौती, अंश मा कटौती,710 मिमी को एक टुक्रा को मोटाई। तयार कलेजो, एउटा सानो रकम छिडकना बेकिंग सोडा को, र एक समय को लागि झूट तल दिन, त्यसपछि यसलाई आवश्यक धुन र तौलिया संग blot छ। नुन र मरिच कलेजो, तीन मिनेट दुवै पक्षलाई रातो-तातो तेल पैन मा पीठो र भुट्नु मा लुढका को त्यसपछि प्रत्येक टुक्रा। थप टुक्रा तपाईं आवश्यक भन्दा भने, तपाईं तलना गर्न सक्छन् र पाँच मिनेट। जिगर तयार छ, एक प्लेट मा फैलाउन र साग र पग्लियो छ जो घिउ, एक स्लाइस संग सजाउनु, जिगर विशेष नम्र स्वाद दिन्छ।
तला कलेजो सुन्ताला संग
कलेजो को आधा किलो;
तोरी को spoonfuls को एक जोडी;
सुक्खा रातो रक्सी सय milliliters;
सुन्तला दुई टुक्रा।
कलेजो फिल्म म्यानुअल तरिकाले शुद्ध र एक चक्कु संग हटाउन अनावश्यक नसाहरु, माला र मांसपेशी को टुक्रा। मोटाई मा एक भन्दा कम सेन्टिमिटरले अंश टुक्रा मा कटौती, प्रत्येक टुक्रा उनको कारण, त्यो पनि नरम हुनेछ, तोरी lubricates। तपाईं बीफ कलेजो तलना अघि, उच्च गर्मी मा दुई मिनेट, र कम मा तीन थप मिनेट, कवर को लागि एक कराइ मा एक सानो पीठो र भुट्नु मा संक्षिप्त गर्छ। त्यसपछि हामी कलेजो पुग्न र पैन मा चिसो पानी, आधा गिलास खन्याउन घिउ, एक cheesecloth मार्फत जोश र तनाव गर्न ल्याउन। एक सुन्तला चिटिक्क छल्ले मा कटौती, र दोश्रो सुन्तला Juicer मार्फत पारित भएको थियो। रस र रक्सी संग घिउ मिश्रण संग पानी, बारे पाँच मिनेट जोश दिने, कम गर्मी मा राख्नुहोस्। कलेजो स्लाइस एक प्लेट मा फैलाउन र साथ सजाउनु सुन्तला सस अलग पेश वा तिनीहरूलाई कलेजो खन्याउन गर्न सकिन्छ।
मा पकाउने बीफ कलेजो रहस्य र सुझावहरू
यो मात्र भुट्नु, र स्ट्यु तर रूपमा स्ट्यु बीफ कलेजो गर्न सम्भव छ? वास्तवमा, उनको स्ट्यु धेरै टोष्ट, तपाईँ उच्च गर्मी को माथि महाराज भने, यो पाँच भन्दा कम मिनेट, सात अधिकतम हुनेछ;
यो एक तातो दूध मा भिजेको अगाडि छ भने यो कोमल र नरम छ;
तोरी मा पूर्व-marinated, यो पनि नरम हुन्छ;
यसलाई अन्त र मरिच मा नुन थप्न आवश्यक - पहिलो, भूमि मरिच अप्रिय गंध हटाउँदछ;
चाँडै तयार र कठोर हुन्छ द्वारा-उत्पादन पीठो मा Breaded।
यस लेखमा हामी यसलाई नरम, tastier बनाउन प्रयोग तरिका कसरी बीफ कलेजो रोस्ट तपाईं बताउन, साथै के सबै भन्दा राम्रो मसला र थप प्रयास गरेका छन्। हाम्रो शरीर उत्पादनको लागि यो मूल्यवान हप्ताको एक पटक प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
चाहन्छ स्वादिष्ट, रसदार, कोमल, दुबला मासु - मासु ओवन सपना पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ प्रयोग खाना पकाउने
एक स्वादिष्ट तरकारी skewers कसरी खाना पकाउनु
विभिन्न तरिकामा गुलाबी सामन नुन जस्तै
सकरखण्ड चिसो स्वादिष्ट कसरी खाना पकाउनु
मशरूम कसरी फोडा गर्न? उपयोगी आशय
नियन्त्रण स्टेशन पनडुब्बी nasosamii, प्रयोगको
उपयोगी र हार्दिक सूप सुकेको मशरूम देखि गरे।
SRO: डिकोड, कार्य, जिम्मेवारी र भर्ना, SRO
कुनै पनि उमेर को एक कलाकार कसरी बन्न
Underfloor ताप लागि इमहजुरआमा: काम सिद्धान्त र उद्देश्य। एक निजी घरमा underfloor ताप पानी
Bering Strait: नयाँ ग्रिड को गलियारे